Fivoriana azon'ny be sy ny maro natrehina nandraisana fanapahan-kevitra momba ny volavolan-dalàna fehizoro mahakasika ny fifidianana | Primature
Fivoriana azon’ny be sy ny maro natrehina nandraisana fanapahan-kevitra momba ny volavolan-dalàna fehizoro mahakasika ny fifidianana
Antenimierampirenena, 03 aprily 2018 – Rehefa nodinihina isaky ny andininy dia lany teo anivon’ny Antenimierampirenena ireo volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana miisa telo : volavolan-dalàna laharana 05/2018 tamin’ny 21 febroary 2018 momba ny fepetra ankapoben’ny fifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka, ny laharana 06/2018 tamin’ny 21 febroary 2018 mahakasika ny fifidianana Filohan’ny Repoblika ary ny laharana 07/2018 tamin’ny 21 febroary 2018 mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka. Nanatrika izany fivoriana fandinihana sy fandraisana fanapahan-kevitra izany ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ireo Mpikambana ao amin’ny Governemanta.
Dingana iray hahafahana miroso amin’ny fifidianana ny fahalanian’ireo volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana teto anivon’ny Antenimierampirenena ity. Nanambara araka izany ny Praiminisitra fa “zava-dehibe ny fandaniana manontolo avy amin’ny alalan’ny maro an’isa ireo volavolan-dalàna telo ireo. Tsy fandresena ho an’ireo nanohana iny volavolan-dalàna iny fotsiny ity androany ity fa fandresana ho an’ny demokrasia, ary fandresena hahafahana miroso amin’ny fifidianana ihany koa”.
Mbola mandalo eny anivon’ny Antenimierandoholona sy ny Fitsarana avo momban’ny Lalàmpanorenana anefa ireo volavolan-dalàna ireo vao lasa lalàna manan-kery tanteraka eto Madagasikara. “Manana fahefana hanitsy ireo volavolan-dalàna ny eny anivon’ny Antenimierandoholona, saingy ny firariana dia ny hisian’ny marimaritra iraisana eo anivon’ny Antenimiera roa tonta. Tanjona iray ihany ny antsika dia ny hahafahana miroso amin’ny fifidiana amin’ity taona ity”, hoy ny Lehiben’ny Governemanta.
Raha nanontanin’ny mpanao gazety mahakasika ny famerenana ny vidin-tsolika amin’ny teo aloha raha nahitana fiakarana izany ny alahady teo, dia nanazava ny Praiminisitra fa “tokony ho dinihina an-databatra boribory ny fampiharana ny “vérité de prix” izany hoe ny fampahalalana ny fametrahana ny vidin-javatra indrindra fa ny vidin-tsolika satria misy fiantraikany amin’ny fiainan’ny vahoaka Malagasy manontolo izany, ka tsy maintsy noraisina iny fanapahan-kevitra iny. Kanefa mba hahafana mametraka ny “structure de prix” mahafapo ny rehetra dia hisy ny fifampidinihana eo amin’ny Governemanta sy ireo mpandraharaha amin’ny resaka solika”.
Marihina fa tapitra androany ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo.
← Fanolorana fanampiana avy amin’ny firenena Indianina
Conseil du Gouvernement du Mercredi 04 Avril 2018 →